Ma la aamini karaa JANAN, muxuuse damacsan yahay? - Axadle Wararka Maanta
Wasiirkii hore ee amniga Maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo dhawaan heshiis la galay dowladda federaalka, gaar ahaan garabka Farmaajo ayaa mar kale dib uga gurtay heshiiska, wuxuuna ku biiray mucaaradka ka soo hor jeeda Farmaajo ee ku sugan Caasimadda Muqdisho.
Janan wuxuu daganaa guryo kasoo horjeedo xarunta Nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka, sida uu ka sheegay shir jaraa’id oo uu ku qabtay Hotel Jazeera ee Caasimadda Muqdisho.
Waxaa la sheegay in loo diray gaadiid dagaal oo kasoo bixiyey gurigii uu daganaa, waxaana loosoo wareejiyey qeybta ay Caasimadda Muqdisho ka dagan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ah, taas oo ah goob aad loo ilaaliyo.
Shir jaraa’id oo Caasimadda Muqdisho uu ku qabtay ayuu Janan isku dayey inuu uga leex-leexdo xaqiiqada jirta, isagoo ka dhigay in uusan dagaal uga soo wareegin dhanka Farmaajo, laakiin haddii ay nabad jirto isagoo dhinaca Farmaajo jooga ayuu ku dhawaaqi lahaa inuu yahay musharax u taagan xilka kursiga xildhibaan ee beeshiisa.
Cilaaqaad ay kooxda Farmaajo lasoo sameysay si uu dib ugu laabto halkii uu daganaa oo laba maalin socday ayaa lagu guul-dareystay, sida ay xaqiijiyeen illo muhiim ah.
Janan wuxuu u sheegay xubno uu la kulmay inuu ka dalbaday kooxda Farmaajo inuu aado Gobolka Gedo si uu usoo xaliyo xiisado ciidanka dhexdooda ah oo ka jira Gobolka, laakiin garabka Farmaajo oo aad uga shakisan in Janan qorshihiisa bedelo markii uu gobolka Gedo ayaa ka diiday in loo fasaxo safarkaas.
Cabdirashiid Janan waxaa la sheegay inuu rabo inuu aado Gobolka Gedo oo la fasaxo, waxaa arrintaas la gaarsiiyey Ra’isul wasaare Rooble, maadaama uu isaga sheegay inaan qofna laga celin karin halka uu u socdo oo aan laga hor istaagi karin inuu ka duulo garoonka diyaaradaha ee Caasimadda Muqdisho.
Hadda way adag tahay in kooxda Farmaajo ay weerarto halka uu dagan yahay Janan oo ay soo qabtaan, arrintaan Xamar waa ka dhammaatay wixii ka dambeeyey dagaalkii 25-kii April, xilligaas oo dib looga saaray magaalada ciidankii xoogga ku soo galay ee Badbaado Qaran.
Ra’isul wasaare Rooble ayaa hadda la sheegay inuu ku maqan yahay xalka safarka Cabdirashiid Janan ee gobolka Gedo, lamana yaqaano sida ay arrintaan ku aqbali karto kooxda Farmaajo .
Kooxda Farmaajo oo culeys badan saareysa kuraasta taalla gobolka Gedo waxay u muuqdaan kuwa aaminsan in Janan uu ka hor imaan doono, haddii uu ku laabto Gobolka, lamana yaqaano sida ay hadda ku hor istaagi karaan socdaalka uu qorsheenayo inuu ku aado gobolka Gedo.
Hakainde Hichilema, the president’s everlasting opponent